Dharka caadiga ah ee Peru, sidee u eg yahay koofiyadda Peruvian-ka? | Wararka Safarka
Dharka caadiga ah ee Peru
Susana Maria Urbano Mateos | | America, Meelaha Dalxiiska loo tago
Waddan waxaa lagu gartaa astaamihiisa, muusiggiisa, qoob ka ciyaarkiisa, midabkiisa, dadkiisa iyo, shaki la'aan, dharkiisa. Dharku maahan oo keliya jiil ama xilli, sidoo kale waa qayb ka mid ah qayb dal ama gobol. El koofiyad peruvian waa tusaale cad oo ka mid ah.
Peru waa wadan leh dhowr gobol, oo leh xaflado aan la soo koobi karin, waa wadan dadkiisu ku fiican yihiin isku darka maaddooyinka iyo jinsiyadaha, magaalo kasta waxay leedahay aqoonsi u gaar ah laakiin aan lumin isku darista midabada iyo dhadhanka. Waxaas oo dhan waxaa lagu muujiyaa cuntadooda oo keliya, laakiin sidoo kale waxaa lagu muujiyaa dharka ay leeyihiin magaalo kasta iyo iidaheeda. Aynu wax yar ka ogaanno koofiyadda Peruvian iyo dharka reer Peru.
Dharka buuraha waxaa lagu gartaa midabka goonnada iyo ponchos-ka, gaar ahaan waaxyaha Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Puno iyo magaalooyin kale oo buuraha ku yaal, in kasta oo qaababka dharka ay ka duwan yihiin waxaa jira wax lagu garto iyaga si siman, waxay ka samaysan yihiin dhogorta vicuña ama qaar ka mid ah auquénids qurux badan oo buurahayadu leeyihiin, si looga ilaaliyo dadka degan aaggan reer Peru dhaxanta waxay xidhaan chullo, oo u eg sida dabool dhogor ah oo dhegaha daboolaya. Qoob-ka-ciyaarayayaasha 'Scissor' waxay ku qurxiyaan dharkooda muraayadaha waxayna ku xardhaan ilaahooda dhabarka.
Xeebta, boodhadhkeeda iyo goonnadeeda waxay ka samaysan yihiin cudbi, inkasta oo lagu dheelayo badda, cudbiga waxaa lagu beddelay xariir loogu talagalay haweenka. Dacwadaha ragga badanaa waxay xirtaan koofiyad ka samaysan caws si looga ilaaliyo qorraxda.
Kaymaha dhexdooda, ragga iyo dumarka qowmiyadaha qaarkood waxay xirtaan goonno dhinacyada laga tolay oo lagu qurxiyay jaangooyooyin joomatari iyo midabyo ka yimid gobolka., maradaas waxaa loogu yeeraa cushma.
Tani waxay ahayd horudhac kooban oo ku saabsan dharka Peruvian, laakiin hadda waxaan rabaa inaan wax yar ka sii qoto dheeraado mawduuca si aad si fiican ugu ogaatid waxa ku saabsan.
1 Reer Peruviansku waa farsamayaqaanno waaweyn
2 Taariikh yar oo ku saabsan Peru
3 Dharka ragga ee Peru
4 Dharka haweenka Peruvian
5 Koofiyadda Peruvian-ka
5.6 Way fasaxday iyada
Reer Peruviansku waa farsamayaqaanno waaweyn
Reer Peruviansku waa farsamayaqaano heer sare ah, dharkooduna waa kuwa guryaha lagu sameeyo xitaa hada qarnigan XNUMXaad waana lagu qadarin karaa sida haddii ay ahaayeen dhar dhaqameed la isticmaali jiray qarniyo kahor. Gudaha Peru, dadkeedu waxay xirtaan ponchos, dhar, busteyaal, funaanado, goono gogosha, gogosha, koofiyadaha, chullos, iyo qaybaha kale ee dharka hooyo.. Dharka dhaqameed ee Peru waa midabo iyo dhalaal aad u qurux badan, waa qurux badan yahay asalkiis inkasta oo dharku aad u qaro weyn yihiin. Dalxiisayaashu waxay la dhacsan yihiin quruxda dharka gacmaha lagu sameeyo waxayna had iyo jeer ka qaataan dharka xusuusta suuqyada Peruvia, mana aha wax lala yaabo!
Taariikh yar oo ku saabsan Peru
Peru waxay leedahay taariikh dheer runtiina waa wax soo jiidasho leh. Dalkan waxaa qabsaday boqortooyadii Isbaanishka qarnigii XNUMXaad. Guulwadayaashii Isbaanishku waxay saameyn ku yeesheen dhaqanka reer Peru laakiin dadkeedu waxay ku guuleysteen inay dhaqankooda ku ilaashadaan dhaqankooda, dhaqankooda iyo waxay aaminsan yihiin.
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee ummadani leedahay waa in reer Peruviansku yihiin farsamo yaqaanno heer sare ah. Waxyaabaha ay soo saarto dharka ayaa lagu tixgeliyaa wadamada kale. Dalxiis kasta wuxuu la dhacsan yahay quruxda dharka gacmeed ee maxalliga ah wuxuuna rabaa inuu wax ka iibsado suuqyada Peruvian-ka ee midabada badan leh.
Dharka laga keenay Peru waxay leeyihiin astaamo xiiso leh sida inay diiran tahay (maxaa yeelay Andes-ka waa qabow oo waxay leeyihiin cimilo aad u beddelmi kara sannadka oo dhan) waana mid guriga lagu sameeyo. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dharka laga sameeyo waa dhogorta alpaca. Intaa waxaa dheer, dharka ayaa leh qaabab joomatari iyo midabyo firfircoon oo ka dhigaya kuwo gaar ah oo aan dib loo soo celin karin.
Dharka ragga ee Peru
Ragga sida caadiga ah waxay xiraan gabal dhar ah oo u eg qaabka dheemanka, kaas oo ah poncho leh midabbo dhalaalaya oo aad u diiran. Waa gabal ballaadhan oo leh dhexda dhexda in madaxa la geliyo. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan (waxay kuxirantahay gobolka) waxaana loo adeegsadaa hadba ujeedadooda. In kasta oo ay jiraan rag maalin walba u adeegsada, haddana waxa caadiga ah in loogu isticmaalo munaasabadaha gaarka ah.
Sidoo kale waa in maskaxda lagu hayaa in ragga ku nool Peru ay xirtaan koofiyado ay ku xiran yihiin kooxo gaar ah oo loo yaqaan "centillo". Iyagu waa midabo badan oo aad u dabaaldegsan, in kasta oo koofiyadda ugu caansan ay yihiin chullo. Chullo waa shay gacmo lagu sameeyay, lagu tolay, oo leh dhegta iyo tass, wuxuu ka samaysan yahay alpaca, llama, vicuña ama dhogor idaad.
Surwaalku waa sahlan yahay oo dhididka ayaa ka samaysan alpaca, llama ama dhogor idaad. Dhididku waa kuleyl waxayna badanaa muujiyaan qurxinta joomatari iyo naqshadaha xayawaanka.
Dharka haweenka Peruvian
Qeybaha ugu muhiimsan ee dharka caadiga ah ee dumarka wadankaan waa: ponchos, dharka, bustayaasha, goonooyinka, dharka iyo koofiyadaha. Suudh kasta ama gabal kasta oo dharka ka mid ah ayaa si weyn ugu kala duwan gobol kasta, maxaa yeelay sidan ayay ku muujin karaan waxyaabaha u gaarka ah magaalo kasta ama magaalo kasta. Tusaale ahaan, dadku waxay ku garan karaan inay haweeney ka timid magaalada ama magaalada iyagoo fiirinaya koofiyadeeda ama inay ka timid qoys taajir ah ama sabool ah.
Dumarku badanaa waxay xirtaan maro garbaha, oo ah qaybo leeg oo maro gacmeed leh. Waa qayb dhaqan ah oo mandahan ayaa la saaraa garbaha waana laga dhaqaajiyaa iyada oo la mariyo foodda hore lagana xidhayo qaybta hore ee xabadka. Dumarku sidoo kale waxay lahaan jireen baararka gacmeed ee loo yaqaan "cikakken" ama tupo waxaana lagu qurxin jiray dhagaxyo qaali ah. Maanta waxay badanaa isticmaalaan boodhadhka xiiridda. Dharka garbaha ee haweenku adeegsadaan waxaa loo yaqaan: lliclla, k'eperina, awayu iyo unkuna waxaana lagu kala saaraa waxyaabaha soo socda:
Llicla Waa marada ragga oo aad u badan oo lagu isticmaalo tuulooyinka.
K'eperina Waa maro weyn oo badanaa loo adeegsado in lagu qaado ilmaha yar yar iyo alaabada si loogu kala qaado meel iyo meel kale.
Awayu Waxay la mid tahay lliclla laakiin way ka weyntahay waana guntiifantahay waxaana sidoo kale loo isticmaalaa in lagu qaado caruurta iyo alaabada.
Unkuna Sidoo kale waa maro sidata laakiin ka yar oo loo isticmaalo in lagu qaado cuntada.
Dhidid iyo jaakado ayaa lagu xiraa dharka garabka hoostiisa. Dhididka ayaa sida caadiga ah loo yaqaan 'synthetic' oo leh midab badan. Jaakadaha ayaa laga sameeyay dharka dhogorta leh waxaana loo yaqaan "juyuna" waxayna badanaa qurxiyaan jirka naagta.
Goonnada haweenka reer Peru waxaa loo yaqaan "polleras" ama "melkkhayOo iyaga waxaa loo jaray koox midab leh oo loo yaqaan "puyto". Waxay ku tolan yihiin gacmo waxayna ka samaysan yihiin maro dhogor ah. Caadi ahaan way lakulmeen oo xidhan yihiin, iyagoo lakabyo ah waxay u muuqan karaan kuwo buuxan, dabcanna waa midabo iyo dhalaal.
Ragga iyo haweenkuba waxay adeegsadaan ajotas (kabaha laga sameeyay taayirrada gawaarida dib loo rogay) oo lagu sameeyo guriga oo aad u jaban.
Koofiyadda Peruvian-kaWaa caado si xoog leh u soo jiidatay dareenka kuwa soo booqda dalka, maaddaama ay hayaan astaamo aad u gaar ah oo si xoog leh u soo jiito dareenka kuwa iyaga ku qanacsan. Caadi ahaan, muuqaalka koofiyadda taas ayaa la adeegsadaa, midabka ama qaabka loo sameeyay waxay la xiriirtaa fursado dhaqaale, sida iska cad, caadooyinkani way ku kala duwan yihiin gobollada, marka lagu daro in koofiyaduhu isku si u sameeyaan, maadaama ay la jaan qaadayaan hadba baahida jirta ee dadka gobolka.
Hadda waxaan ka hadli doonaa koofiyadaha ugu caansan ee laga heli karo Peru qurux badan.
Kuwaas koofiyadaha waxaa laga sameeyaa caleenta timirta kuwaas oo ku hoos jira qorraxda xoogga leh muddo dheer, si ay u qaataan midab cad, ka dibna u sii wadaan siinta qaabka loo yiri Koofiyadda Peruvian-ka waxaa badanaa lagu qurxiyaa xargaha madow.
Magaceedu wuxuu ka yimid Pirua, halkaas oo ah meesha loogu isticmaalo badiyaa sababtoo ah xeebta waqooyiga ee quruxda badan.
Waa a Koofiyadda Peruvian si loogu isticmaalo dhaqan ahaan, oo haweenku badanaa u isticmaalaan xilliyada ciidaha, waa yar yihiin oo kooma yar ayaa ku jirta. Waxay badanaa ku qurxiyaan ubaxyo ama waxyaabo kale oo midab leh oo saameeya isha. Waxay ka samaysan tahay dhogorta idaha.
Quispillata, ragga dhalinyarada ah waxay inta badan u isticmaalaan wax qurxin la'aan ah, ama xilliyada qabowga.
Meeshan, koofiyadaha caadiga ah ayaa loo qaybiyaa ragga iyo dumarka.
Ragga, waxaa badanaa la arkaa iyagoo xiran koofiyado ka samaysan dharka dhogorta adhiga ah, kuwaas oo la isticmaalo Axadaha; ciidaha, kuwani waa wax laga beddelay halka baalka wejiga loo kicin doono, marka lagu daro in lagu qurxiyey ubax
Haweenka dhanka kale waxay wataan koofiyadaha bunni, cawl ama madow, oo lagu samayn doono dharka dhogorta idaha ah. Gabdhaha da'da yar ee kelidood ah waxay badanaa ku qurxiyaan koofiyadahaas ubaxyo midabbo qurux badan leh mararka qaarkoodna waxay isticmaalaan ubaxyo dhab ah
Halkan, koofiyadaha ugu badan ayaa ah kuwaas waxay leeyihiin koob hooseeya, oo lagu samayn doono dharka dhogorta adhiga ah. Kuwaas oo xajiya cawl, madow, midab fudud iyo midab madow. Kaas oo lagu qurxin doono xarig iskaga gudbaya iyaga oo taagan.
Dumarku sida caadiga ah way xirtaan koofiyado ka samaysan dhogor iyo caws, kuwaas oo lagu qurxiyay xargaha oo kuwana loo kariyo doonaa samaynta rosettes (ribbons).
Ragga, oo aan ka duwanayn dumarka, waxay yeelan doonaan koofiyado lagu samayn karo qalab kala duwan, midkoodna waa dhogor iyo caws, midka kalena waa dhogorta idaha ee la cunay, oo lagu cawlan karo Kuwani waxaa lagu qurxin doonaa xargaha dhogorta midabbada badan leh.
Way fasaxday iyada
Aaggan oo lagu tilmaamo beeraley waaweyn. Koofiyadaha ku badin doona tan waxay noqon doonaan kuwa lagu sameeyo fiber khudradda: Timirta, degdega iyo gogosha.
Halkan, kala sareynta waa la kala sooci karaa, maadaama qofka awooda u leh shaqaaluhu sida caadiga ah uu faras fuuli doono, marka lagu daro xirashada koofiyad xarrago leh oo aad u ballaaran, oo lagu samayn doono timir.
In Aagga Moquegua, dharka ayaa lagu gartaa Ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna muuqaalka badan, aaggan koofiyadaha waxaa isticmaali kara dumarka iyo ragga labadaba, taas oo koofiyadaha lagu qurxiyo ubaxyada iyo jaangooyooyin isku xigxiga ay ka muuqdaan, taas oo loo isticmaali doono xafladaha.
Peru waa meel hodan ku ah dhaqanka, waxaana waqtiga sii yaraanaya hiddaheeda, taas oo ka dhigtay soo saarista dharkeeda inay yaraato, laakiin waxaa mahad leh caadooyinka wali ku xidideysan dadkooda, kuwani waa lala wadaagayaa oo la farayaa jiilka cusub. Shaki la'aan, koofiyadaha Peruvian-ku waa kuwa u taagan asalnimadooda iyo quruxdooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Dharka caadiga ah ee Peru
Waxaan jeclaan lahaa in badan oo faahfaahin ah magacyada dhar kasta IWM
Ku jawaab Bern
Dharka caadiga ah ee reer Peru maaha dhar fudud, waa dhaqan la socda muusigga, qoob ka ciyaarka, isu imaatinnada qoyska, iwm. qoys kasta iyo koox bulsheed oo wadamadan ka tirsan. Waxaa jira sheeko dhan oo ka dambeysa midab kasta. NOOL!
Iga raali noqo, waxaan u baahanahay inaan ogaado sida goonida ah dharka badmaaxa loo yaqaan 'Ayacuchana' ee maraakiibta badmaaxa u eg yahay, qaasatan qoorta oo gogosha darteed ii daayaan inaan arko haddii ay tahay qoor ama square Aad baad u mahadsantahay, waxaan sugayaa kaalmadaada waxaanan ku waydiisanayaa si deg deg ah.
Ku jawaab Leonor
Tilmaamaha degdegga ah ee shandadaha gacanta ee diyaaradaha